Izitolo eziku-inthanethi zivaliwe! Umcimbi we-Mac useduze | Izindaba ze-IPhone
Emizuzwini embalwa edlule Izitolo eziku-Apple zivaliwe ukufaka izindaba ezizokwethulwa namhlanje ngoMsombuluko ntambama. Namuhla ngo-Okthoba 18, 2022 sinomunye umcimbi we-Apple olindile futhi kulokhu umcimbi we-Mac.
Kusobala impela ukuthi amakhompyutha amakhulu azovuselelwa yi-Macs, kepha futhi sinamahemuhemu futhi sicishe siqinisekise ukuthi sizobona ama-AirPod wesizukulwane sesithathu futhi bangahle balinge ukwethula ukuvuselelwa kwama-HomePods, ngani?
Umcimbi ngaphandle kokuvuza okuqinile
Kulokhu, ukuvuza kwemikhiqizo emisha kuyabonakala ngokungabikho kwayo. Kungenzeka ukuthi lokhu kuhle noma kubi, okusobala ukuthi kulo mcimbi i-Apple yenze umsebenzi wokufihla imikhiqizo kahle kakhulu (okungenani ngesikhathi sokubhala le ndatshana) ngakho namhlanje ntambama sizoba nezimanga kokuhle noma okubi.
Manje yisikhathi sokuphumula, udle okuthile bese ulungisa yonke imininingwane ukujabulela isethulo okulindeleke ukuthi sibe ngesinye seziqine kakhulu, kunokungabaza okuningi ngemikhiqizo emisha abangayethula futhi bayilinde uhla lweMac oluvuselelwe ngokuphelele ngalezi zinqubo ze-Apple ARM. Umlayezo okhonjiswe esitolo uthi "Sizobuya ngokushesha" yize kuyiqiniso ukuthi abalandeli be-Apple bacacile ukuthi kuyavalwa amahora ambalwa, okungenani kuze kube sekupheleni kwesethulo okulindeleke ukuthi sibe cishe ngo-20: 30 cishe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Imikhiqizo ye-Apple » Izitolo eziku-inthanethi zivaliwe! Umcimbi we-Mac useduze
IBowers & Wilkins Zeppelin manje isekela i-AirPlay 2